Southern Norway - Wikipedia
Konfoor Norway (Norwegian: Sørlandet; lit. "Southland") waa juquraafi (dhul daaqsi) oo ku yaal xeebta Skagerrak ee koonfurta Norway. Gobolka waa sharax aan rasmi ahayn maaddaama aysan lahayn wax dowlad dowladeed ah. Waxay qiyaastii u dhigantaa boqortooyadii hore ee Agder iyo sidoo kale labada gobol ee maanta jooga ee Vest-Agder iyo Aust-Agder. Goobta guud ee isku dhafan ee gobollada Vest-Agder iyo Aust-Agder waa 16,493 kilomitir oo isku wareeg ah (6,368 sq mi). Magacu waa mid cusub, markii ugu horaysay ee loo isticmaalo Norway ilaa 1900.  
Descending, from top: Lindesnes fyr, Bystranda in Kristiansand, Kardemommeby in Kristiansand Zoo, The Lista beaches, Downtown Kristiansand, Flekkerøy outside Kristiansand, Arendal, Risør, Brekkestø in Lillesand, Mandal.
|250px|none|alt=|Collage of Sørlandet]]Collage of Sørlandet
Tirada dadka (2009)
• Tiro Badnaan 17/km2 (44/sq mi)
Magac uyeel Sørlending
Nominal GDP per capita (2001)
Goobta waxaa ka mid ah meelaha xeebaha ah ee Skagerrak oo ku yaal gudaha gudaha buuraha Setesdalsheiene. Waxaa jira dooxooyin badan oo waaweyn oo ka soo jeeda buuraha ilaa koonfur iyo bariga badda. Dhulka ugu sarraysa waa Sæbyggjenuten 1,507 m (4,944 ft).  
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Southern_Norway&oldid=183211"
Last edited on 19 Oktoobar 2018, at 13:52